Nhau - Maitiro Ekuita Neakangwara Kuyerera Peristaltic Pump Kuburitsa Mvura Kudonhedza Phenomenon
Yekutanga Inosiyana-mhanyisa Peristaltic Mapampu
Njere Kuyerera Mapombi
Kugovera Peristaltic Pumps
Microliter Peristaltic Mapombi
Batch Kutamisa Peristaltic Pumps
Pneumatic mota Peristaltic Pump
Michina Piston Pumps
Shanduka Speed ​​Gear Pumps
Kuparadzira Gear Pumps
Peristaltic Pump Vhidhiyo
Syringe Pump Vhidhiyo
Maitiro Ekuita Neakangwara Kuyerera Peristaltic Pump Kuburitsa Mvura Kudonhedza Phenomenon
Kana isu tikashandisa kuyerera peristaltic pombi kuendesa iyo mvura, isu tichaona kuti mvura iri mupombi haina kumira kuyerera nekukasira, inowanzo donha zvishoma. Hazvirevi kuti iyo pombi inomira kutenderera uye mvura inomira kuyerera ichidzika mukufunga kwedu, asi iyo mvura inomira kuyerera apo iyo mvura inodonha mupombi. Kuitika kwechiitiko ichi kunonzi kudonhedza chiitiko.
Zvinokonzera kudonhedza kuyerera peristaltic pombi?
Ichi chiitiko chinowanzoitika chemvura. Icho chikonzero ndechekuti kana iyo pombi iri kuendesa mvura, iyo pombi nzira yekuburitsa pombi inotarisana pasi uye ine imwe giravhiti. Iyo pombi painomira kutenderera, iyo mvura inoyerera ichidzika zvishoma nezvishoma nekuda kwayo kwayo ductility uye simba rinokwevera pasi, uye mhedzisiro yacho ichange ichidonha pamuromo wepombi kusvika iyo mvura iri mubhosvo ichidonha zvachose. Panguva ino, vamwe vanhu vangafunga kuti sezvo mvura irikudonha negiravhiti, chii chinofanirwa kuitwa kana siphon phenomenon ikaitika? Muchokwadi, usazvidya moyo. Ini ndinotenda munhu wese anoziva nezve anoshanda musimboti weperistaltic pombi. Iyo pombi inotsamira pamatanho ekusvina iyo hosipaipi (iyo inlet inogadzira isina kunaka kumanikidza uye iyo nzira inoburitsa yakanaka kumanikidza), uye musiyano wekumanikidza unoshandiswa kutapurirana. Kunyangwe kana kutenderera kukamiswa, iyo hosipa inosvinwa zvakanyanya, kuti iyo inopinda uye yekubuda ibatanidzwe kudzivirira chiitiko ichi.
Mhinduro kune inodonha chiitiko
Ini ndataura zvikonzero nei mvura yacho ichidonhedza muhosi. Imwe yadzo kusimba kweyepi. Icho chikonzero nei iyo mvura ichidonha ndeyekuti kukakavara kwepombi kwakaderera pane ductility uye kukomba kwemvura yacho pachayo. Kana isu tichiwedzera iyi elastic tension kuti iite yakakura kupfuura iyo yekudzika simba pane iro mvura, zvakakwana kuti tichinje chiitiko ichi.
1. Iyo dhayamita yeiyo hosipaipi inoburitswa yakadzikiswa, iyo mvura iri mutabhu inova diki, asi iko kusimba hakushanduke, nekudaro kugadzirisa dambudziko.
2. Wedzera vharuvhu yekumanikidza uye gadzira imwe-nzira yekumanikidza vharuvhu kuburitsa. Valve ichavhurwa nekumanikidzwa kwepombi pachayo painenge ichishanda, uye vharafu inozovhara kana yamira.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti dambudziko rekushushikana kwechiitiko. Kana iyo pombi ichishandiswa kuendesa mvura, izvo zvinokonzeresa zvinokonzeresa kuti mvura iri muparistaltic pombi hosipai kuti isvemedzwe kumashure nekuyamwa kumashure. Naizvozvo, hupamhi hwe hosipaipi hunofanira kuve hukuru kupfuura hurefu hwepombi inoyamwa kumashure, zvikasadaro ichave yakakonzerwa nekushushikana Hapana kudonha kunoitwa.
Izvo zviri pamusoro ndezve kuitika uye kudzivirira kwechinhu chinodonha chekuyerera peristaltic pombi. Kana iwe usati uchinzwisisa kana kuishandisa zvisirizvo, unogona kureva Read Fluid after-sales engineer.
Post nguva: Jun-08-2021
Kwete. 999 Fuxing Road, Baoding, China